Esi Ndozi D3dx9_25.dll na-efu ma ọ bụ na achọtaghi Njehie
Windows Ozi Njehie
Esi achọta D3dx9_25.dll Achọghị ma ọ bụ Njehie efu
A Nchọpụta Ntuziaka maka D3dx9_25.dll Njehie
Ozi Njehie D3dx9_25.dll
Enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche d3dx9_25.dll njehie nwere ike isi gosipụta na kọmputa gị. A na-edepụta ụfọdụ n'ime ozi ezighi ezi d3dx9_25.dll ebe a.
"Enweghị ike ịchọta d3dx9_25.dll"
"Enweghị ike ịchọta ụlọ akwụkwọ d3dx9_25.dll dị omimi na ụzọ a kapịrị ọnụ [PATH]"
"D3dx9_25.dll faịlụ efu"
"D3DX9_25.DLL adịghị efu. Dochie D3DX9_25.DLL wee gbalịa ọzọ"
"D3dx9_25.dll achọtaghị. Ntinye akwụkwọ ahụ nwere ike idozi"
"Njehie ịmalite ngwa ahụ n'ihi na faịlụ d3dx9_25.dll ahụghị"
"Ngwa ahụ amaliteghị ịmalite n'ihi na ịchọtaghị d3dx9_25.dll"
Mmehie njehie D3dx9_25.dll na-apụta mgbe usoro ngwanrọ, nke bụ egwuregwu vidiyo, amalite. Mgbe ụfọdụ, njehie d3dx9_25.dll ga-egosi mgbe a kwụsịrị egwuregwu ma mana tupu egwuregwu ahụ amalite.
Na ngwa ndị ọzọ, njehie d3dx9_25.dll nwere ike igosi n'ihu n'ihu ụfọdụ atụmatụ ndịna-emeputa.
Ihe kpatara D3dx9_25.dll Njehie
Ihe kpatara nsogbu D3dx9_25.dll na otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ site na otu nsogbu - ụdị nsogbu Microsoft DirectX.
D3dx9_25.dll faịlụ bụ otu n'ime ọtụtụ faịlụ nke mejupụtara nchịkọta DirectX software. Ebe ọ bụ na DirectX na-eji ọtụtụ egwuregwu dabeere na Windows, ihe ọjọọ d3dx9_25.dll na-egosiputa naanị mgbe ị na-eji mmemme ndị a.
Don & # 39; N Na - achọ Idozi Nke A Onwe Gị?
Ọ bụrụ na ịchọrọ idozi nsogbu a n'onwe gị, gaa n'ihu na nsogbu nsogbu na mpaghara na-esote.
Ma ọ bụghị ya, lee Olee Otú M Ga - esi Mee Ka Kọmputa M Kwụsị? maka ndepụta zuru oke nke nhọrọ ịkwadoro gị, tinyere enyemaka na ihe niile tinyere ụzọ dị ka ịchọtapụta ụgwọ nrụzi, ịchọta faịlụ gị, ịhọrọ ọrụ mmezi, na ọtụtụ ihe ọzọ.
Esi edozi D3dx9_25.dll Njehie
Ihe Dị Mkpa: Emela, n'ọnọdụ ọ bụla, budata faịlụ DLDDDDDDDDDDD DLL n'onwe ya site n'otu ebe ntanetị DLL. Enwere ọtụtụ ihe dị iche iche na nbudata DLL site na saịtị ndị a abụghị ezigbo echiche .
Cheta: Ọ bụrụ na ibudatalarị d3dx9_25.dll site n'otu n'ime ndị DLL saịtị ahụ, wepu ya site na ebe ọ bụla i depụtara ya ma gaa n'ihu na usoro ndị a.
Malitegharịa ekwentị gị .
Mmehie d3dx9_25.dll nwere ike ịbụ nsogbu nke otu oge na ịmalitegharịa dị mfe nwere ike ihichapụ ya kpamkpam. O yighị ka nke a ga-edozi nsogbu ahụ, mana ịmalitegharịa bụ mgbe niile ịmalite nzọụkwụ nsogbu.
Wụnye ụdị Microsoft DirectX ọhụrụ . Ohere bụ, mmelite na ngwa ọhụrụ nke DirectX ga-edozi d3dx9_25.dll achọtaghị njehie.
Rịba ama: Microsoft na-ebute mmelite na DirectX na-enweghị mmelite nọmba ma ọ bụ akwụkwọ ozi ma jide n'aka na ịwụnye nkwenye ọhụrụ ọ bụrụgodị na mbipute gị bụ otu ihe ahụ.
Rịba ama: Otu usoro mmemme DirectX ahụ na-arụ ọrụ na nsụgharị Windows niile gụnyere Windows 10, 8, 7, Vista, na XP. Ọ ga-eji dochie faịlụ DirectX 11, DirectX 10, ma ọ bụ DirectX 9.
Iche na nsonaazụ DirectX ọhụrụ sitere na Microsoft adịghị edozi njehie d3dx9_25.dll ị na-enweta, chọọ maka usoro mmemme DirectX na egwuregwu gị ma ọ bụ CD ngwa ma ọ bụ DVD. Mgbe mgbe, ma ọ bụrụ na egwuregwu ma ọ bụ usoro ọzọ ejiri DirectX, ndị mmepe ngwanrọ ga-agụnye otu exemplable nke DirectX na diski setup.
Mgbe ụfọdụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile, ụdị DirectX gụnyere na diski ga-arụ ọrụ nke ọma karịa usoro kachasị ọhụrụ dị na ntanetị.
Wepu egwuregwu ma ọ bụ usoro ngwanrọ wee degharịa ya ọzọ . Ihe nwere ike imere faịlụ ndị ahụ na mmemme ahụ na-arụ ọrụ na faịlụ d3dx9_25.dll na ntinye dị mfe nwere ike ime ihe atọ ahụ.
Weghachi faịlụ d3dx9_25.dll site na ngwugwu DirectX ọhụrụ . Ọ bụrụ na usoro nkwụnye nsogbu ndị ahụ adịghị arụ ọrụ iji dozie nsogbu d3dx9_25.dll gị, gbalịa wepụ faịlụ d3dx9_25.dll n'otu n'otu site na ngwa DirectX.
Melite ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo gị . Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ngwọta kachasị mma, n'ọnọdụ ụfọdụ na-emelite ndị ọkwọ ụgbọala maka kaadị vidiyo na kọmputa gị nwere ike idozi nke a DirectX mbipụta.
Ozihie njehie d3dx9_25.dll nwere ike itinye aka na mmemme ọ bụla nke na-eji Microsoft DirectX, ọtụtụ egwuregwu vidio.
Ụfọdụ egwuregwu ndị a maara maka ịmepụta d3dx9_25.dll njehie gụnyere Heroes nke ike na Ime Anwansi, Agha, Age nke Empires 3, Fable: Isi Efu, Zoo Tycoon 2, Rise of Nations: Nbili nke Akụkọ Legends, na ndị ọzọ.
Ọ bụla nke sistemụ arụmọrụ Microsoft kemgbe Windows 98 nwere ike ịdaba na d3dx9_25.dll na nsogbu DirectX ndị ọzọ. Nke a gụnyere Windows 10 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista , Windows XP , na Windows 2000.
Ka Inwe D3dx9_25.dll Ihe?
Hụ Nweta Enyemaka Ndị Ọzọ maka ịmatakwu m na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ site na ozi-e, na-eziga na forum tech support, na ndị ọzọ. Jide n'aka ka m mara kpọmkwem ozi ezighi ezi d3dx9_25.dll na ị na-anata na usoro, ọ bụrụ na ọ bụla, ị meelarị iji dozie ya.
Esighi Ndozi User32.dll achọtaghi ma obu ezighi ezi na-efu
Esi Ndozi D3dx9_35.dll achọtaghi ma ọ bụ ezighi ezi
Esi Ndozi dochie 0x00000022 Njehie
Gịnị bụ Conhost.exe?
Esi Ndozi D3d9.dll achọtaghi ma ọ bụ njehie efu
Esi Ndozi D3dx9_41.dll Achọghị ma ọ bụ Njehie Na-efu
Otu esi dozie D3dcompiler_42.dll Achọghị ma ọ bụ Njehie efu
Esi edozi koodu njehie 10
Esi achọta Msvcp71.dll achọtaghị ma ọ bụ ezughị oke
Ọnụ ọgụgụ nke Digital Stubble II
Top 5 Ebe nrụọrụ weebụ maka Free Full Movie Length
Kedu ihe nkuzi na ahụmahụ dị mkpa iji bụrụ onye Mmepụta Web?
Nkọwapụta nke DTS: X Usoro Ọdịdị Gburugburu
Debere Web Hosting for Starting a Hosting Company
Otu esi gbanyụọ mbinye aka Email gị na Gmail
Otú Market App nwere ike isi rite uru n'ahịa ahịa
Iji Google Kama Ntughari Akwụkwọ
Na-eduzi ndị Camcorders Waterproof
4 Atụmatụ maka Ịmata Ihe Mmetụta Mmekọahụ
Otu esi emekọrịta Kalinda Google, Outlook na iPhone Kalinda
Atụmatụ maka ịdọrọ igwefoto gaa n'ọdụ ụgbọ elu
9 Atụmatụ Tupu ịzụta na E-Reader
Mgbawa: Iji Window Nchọta Nchọpụta
Naghachi gị Android egwuregwu Na-echekwa na Helium
Otu esi ejikọ Wii gị na Television gị
Nduzi na Bellsprout (Pokemon # 69)
Esi weghachite Foto ndi achọputara na ihe ndi ihe ntanetiri
Ihe niile gbasara MPEG Streamclip: Mkpesa na mbupụ vidiyo